amasilinda umfutholuketshezi asetshenziswa ukucindezela i-plunger bese beshayela hlobo. Ububanzi ukulungiswa kuhluke. Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi iningi amamodeli okushiwo. Uma sicabangela ushintsho kuhlelo kudivayisi plunger, baye basebenzisa a se ekhethekile.
Ngokushesha laths ezenziwe ngensimbi ayalolongwa. Uma sikhuluma amasilinda wokubacindezela ngoba ashukumisa ukucindezela, ukuthi banayo ezahlukene ubukhulu pistons. Ingxenye engezansi bavela onobuhle kwenziwe intambo yangaphakathi noma yangaphandle. Kuyinto isilinganiso izinga isilinda wokubacindezela esifundeni ayizinkulungwane 7. Hlikihla.
Khombisa kusezandleni zakho
miller abanolwazi ongakwenza ku cylinder yakho siqu. Cindezela (okuzenzela) ngokuvamile yakhelwe umthwalo amancane, ngakho kwaba nomhlangano wokuqala kuyakhethwa ngenxa encane ubukhulu piston. Ngaphezu kwalokho stud ashiselwe nalokho.
Ukuze pad ubambe liner esetshenziswa. Ngaphezu kwalokho, ukwenza isilinda wokubacindezela ngokuba isikhamo sewayini ngezandla zakho zidinga emkhonweni. Kufanele liguquguquke kuze kuphele piston. I ububanzi isilinganiso nenduku ingeyomhlane 60 mm. Uma sicabanga nokulungiswa ukucindezela drive, bese ekupheleni uMbhalo kuthiwa soldered Bonki ekhethekile.
amathani 20 Amadivayisi
amasilinda umfutholuketshezi yalolu hlobo ekhiqizwa ngenxa plunger futhi ukucindezela ushayela. Pistons sezisungule ububanzi kufika ku-50 mm. Sikakhiye asetshenziswa ngokuqondile steel ukushisa ukumelana. Kwezinye ukucupha, kukhona uphawu olukhethekile. I ukushuba we spigot kulesi simo incike ububanzi piston. Buxhomeke onobuhle ezifana ukulingana uhlobo eyindilinga. Abanye onobuhle une-stop Lesisemkhatsini. Kuyinto isilinganiso isilinda ecishe ibe yizinkulungwane 7. Hlikihla.
Amamodeli amathani 30
cindezela umfutholuketshezi amathani 30 bayindlala e umkhakha ngoba nginyathela izitsha ezahlukene. Pistons babe onobuhle eziningi dempirovannogo uhlobo esetshenziswa. Ngokushesha induku setha mayelana 60 mm ububanzi. Ukucabangisisa Ngethuba Lokungenela isilinda yalolu hlobo esifundeni 22 kg. Induku isetshenziswa ngaphandle obandayo. Ngesikhathi ukulungiswa etholakalayo ukucindezela drive emkhonweni. Ngu ubukhulu kufakwe ku-piston. Flanges zonke ukucupha ogibele imilenze ekhethekile. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi emakethe linikeza amasilinda wokubacindezela ngaphandle izikhonkwane. Lining zenziwa steel ayalolongwa. Thenga imodeli ezitolo kungaba njengoba low ayizinkulungwane 5. Hlikihla.
Amadivayisi ngenduku eziphothene
amasilinda umfutholuketshezi for ukucindezela yalolu hlobo zakhiwe ubukhulu ezincane. Pistons onobuhle, njengoba umthetho, eyenzelwe amathani angu-20. Kwezinye ukucupha, amasilinda ezisetshenziswa ngezikulufo. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi kwemakethe ukuguqulwa nge Bonk. Basuke etholakala i-engela 90 degrees. Inesisindo i isilinda isilinganiso kanye futha ukuba umshini yalolu hlobo esifundeni 20 kg, futhi kubiza cishe izinkulungwane 7. Deda.
Ukusetshenziswa Flanges ububanzi
amasilinda umfutholuketshezi nge Flanges ububanzi bayindlala kwabezindaba ukuphrinta. Ngokwesilinganiso, ziklanyelwe ngoba angu-30. Kulokhu, izinduku ukushisa steel ukumelana esetshenziswa. Ezinye ukushintshwa we piston ezinkulu-ububanzi isethi. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi zikhona amasilinda wokubacindezela, okuyinto abe emikhonweni zokuzivikela. Amadivayisi anjalo nesisindo phakathi 25 kg.
I-sleeve wonke amamodeli zitholakala ngaphansi stem. Ngqo Flanges aboshelwe emkhonweni. Seals asetshenziswa kumadivayisi imilenze ekhethekile. Omagazini cishe zonke izinguqulo atholakalayo. Ingabe kulezi zinsuku eliphezulu amasilinda wokubacindezela emhlabeni izinkulungwane 8. Ruble.
amasilinda umfutholuketshezi salolu chungechunge zenzelwe nomthwalo amathani 25. I piston kule imodeli ne ububanzi 50 mm. Induku elisetshenziswa apharathasi yohlobo eziphothene. Uma ukholwa ukuthi abanikazi unhlangothi piston e uMbhalo lingaphansi kuka-70 mm. Bonki kule divayisi anemidwebo ahlelwe nge-engela kancane. Ngqo isicelo damped isilinda hlobo.
Ngenxa enamathela ekhethekile piston ongamelana lokushisa eliphakeme. Kuze kube manje, lezi onobuhle zivame ukufakwa idrayivu yabezindaba. Thenga amasilinda umfutholuketshezi ngoba cindezela (wokubacindezela), umsebenzisi uyakwazi njengoba low ayizinkulungwane 5. Deda.
Imininingwane Model "Thorin"
Lezi amasilinda wokubacindezela ngokuba isikhamo sewayini bayakwazi ukumelana imithwalo nje amathani angaba ngu-20. Uma ukholwa ukuthi abanikazi, le pistons uzokhathala kakhulu kuyaqabukela. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi induku lihlelwe lwedivayisi dempirovannogo. Bonki le imodeli ibekwe i-engela degrees 50. Emqulwini ucije esetshenziswa uhlobo ejwayelekile. Cover ngaphansi emikhonweni e imodeli samanje engekho.
Uma ukholelwa ukuthi ukubuyekezwa abanikazi, lokhu isilinda asifanele ukushayela ukucindezela. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi imodeli has a flange kusulwe ngokushesha. Uhlonze lwalo kulingana 2.3 mm. Ibeke ngenhla nje uphawu. Ngokusho imibhalo ye ubukhulu piston elilingana 55 mm. Buxhomeke le imodeli azitholakali. Thenga yomsebenzisi oshiwo uyakwazi ram njengoba low ayizinkulungwane 6. Hlikihla.
Imibono kwi "TS" onobuhle
Lezi amasilinda ziyatholakala nabezindaba kuphela pistons steel. Uma le ulwelwesi abahlinzeke ephezulu lokushisa hlobo. Konke lokhu kusikisela ziwohloke elincane umkhiqizo. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi idivayisi ongamelana imithwalo esindayo. Uma ukholwa ukuthi abanikazi, imodeli ke kungenziwa ogibele cindezela nge nomthwalo amathani afinyelela ku-20.
Uphawu divaysi isebenzisa ezimbili. Cover ke isicelo dempirovannogo hlobo. Ngqo ogibele liner isilinda. Uma ukholelwa ukuthi ukubuyekezwa, ke deforms ayivamile. Flange kudivayisi nge ububanzi ezincane. Isikhwama esetshenziswa entabeni ejwayelekile. Eyelet kulokhu lingekho. Thenga kuboniswe isilinda wokubacindezela umsebenzisi inhlukano ungacindezela ngentengo ayizinkulungwane 8. Ruble.
Izibuyekezo amasilinda "Line"
Wathi isilinda izibuyekezo ezivela abathengi uthola omuhle. Kulokhu, lo mvimbo piston isezingeni 66 mm. Ngokushesha seal usebenzisa ukujiya encane, kodwa ugqoke kancane. Uma ukholwa ukuthi abanikazi emikhonweni elisetshenziswa idivayisi okuhlala. Umthwalo esiphezulu ukuthi uyakwazi withstanding kuyinto angu-30.
Cover le imodeli Yenziwe ukushisa ukumelana ungqimba. Lolu dengezi isetshenziswa njengoba uhlobo damped ejwayelekile. Bonki le imodeli kukhona engela kancane. Ngokusho imibhalo kudivayisi, wathi isilinda wokubacindezela has Flanges ezimbili. Omunye wabo itholakala ngasesinqeni se emkhonweni. Enye flange sise piston. Buxhomeke le imodeli asetshenziswa uhlobo eyindilinga. Isiqu imodeli ogibele ubakaki ekhethekile.
Iphikhodi efakwe kule apharathasi incane. Ungqimba ingqikithi uMbhalo 33 kg. Ifanele wathi ukuguqulwa kuphela ukushayela ukucindezela. Kulokhu ububanzi piston ka 54 mm. Thenga wokubacindezela cylinder modet umsebenzisi ngentengo ayizinkulungwane 11. Hlikihla.
Amabhayisikili Royal Baby - Ngohlelo olungenakuqhathaniswa izinga, ukukhanya kanye nokuqina
Rifle RFP: imithetho Ukukhetha, umlando futhi abanye izincomo
Le filimu "Orleans": libuyekeza ababukeli
Stels 250 Enduro: ekuhlaziyeni isithuthuthu
Cyclodynon: ukubuyekezwa, izincazelo, izinkomba
Nisprovergatel usekela Bazarov. "Obaba and Sons" - inoveli mayelana impikiswano imvama